Kuhle komoya isibhamu Russian noma ukukhiqizwa angaphandle
Ezemidlalo Ukufaneleka, Imishini
Ayikwazi ukuthola okungcono emoyeni isibhamu, kodwa singasho ngokuqiniseka ukuthi lokhu isikhali esiyokwakhiwa ku circuit ngoku-akhishwa. Umbandela eyinhloko izithombe kuqhathaniswa amandla hhayi kuphela iyatholakala futhi isimo, kodwa futhi izilinganiso jikelele.
Iqiniso lokuthi kukhona ezinye onobuhle izikhali, wenza ngesisekelo ngezibhamu esifushane, futhi ngenxa yalokho nginemibuzo usayizi kunalokho umxhwele. Ngakho, amandla isibhamu iyakhula. Ngakho okungcono emoyeni isibhamu kufanele khonga ngaphakathi the ingxenye amasampula ezihlangene. Kuyinto engenakwenzeka hhayi ukuziqhakambisa yokuthi Ukuthwala izikhali ezinjalo ngeke kube lula ngoba i-compact okwamanje akukho ngokuphazamiseka.
Kuhle komoya isibhamu nzima ukunquma ngoba idivayisi ngoku-akhishwa unekhono ulungise amandla shot. Iziqu anezikhali onobuhle efanayo imfushane kakhulu, ngakho ibanga esiphezulu nesivinini inhlamvu phezu umfutho womoya e igobolondo kuncike ngokuqondile. Ngemva shot ngamunye, emoyeni onomfutho edliwe, kancane kancane amandla incipha.
Hhayi okungcono emoyeni isibhamu, kodwa ezinamandla kakhulu - nguye kushintshiwe ngesandla. imikhiqizo Homemade bahluke ngokuphelele, zonke calibers nosayizi. abalandeli abaningi naye uqobo wayezikhonza yokukhiqiza of ngcono isibhamu emoyeni, ngezinye izikhathi amaphethini kukhona izinga kuhle okusezingeni eliphezulu futhi ephakeme ukuze analogs akhona emakethe.
ngokuvamile ochwepheshe Western uvumile ukuthi okungcono isibhamu womoya emhlabeni - kuba igesi cylinder Crosman C31. Ngenxa izici zayo lobuchwepheshe, linamandla eliphakeme. Flight ububanzi kakhulu anda kuqhathaniswa nezinye ekilasini izikhali efanayo. Nge side singene kushaft Onjiniyela anda Isivinini nomlomo 150 metres ngomzuzwana. Pistol ukudubula kwenziwe kuphela ngensimbi amabhola. Leli bhokisi Yenziwe eliphezulu plastic, isisindo ingqikithi lingaphansi kuka 640 amagremu. Omunye izinzuzo main yaleli sampuli inqwaba isibhamu amanye ethangini, nge umthamo olufakiwe of labadubuli Wacishe ukuba ukutjhatjalaliswa ibhaluni.
Ezimakethe Russian okungcono emoyeni isibhamu for ukuzivikela - ke Anics A -112, model of "Aniks". Wayengekhona ikakhulukazi kunabayeni nozakwabo Western, kodwa umehluko othize. Amandla kanye kokuqala velocity we ichashazi nsé imodeli Crosman C31. Amapharamitha Kobuchwepheshe isibhamu Russian ezenziwe ibhekisela ohlotsheni izikhali semi-automatic. esitolo 15 lunamandla ka 4.5 mm ubukhulu amachashazi. I amabhola steel ezisetshenziswa njengeziwusizo nezinhlamvu.
Ngokusho inani isibhamu ezivela inkampani imodeli ibhaluni "Aniks" yehlulekile adlula yi encintisana Western. I isibhamu angakhiqiza isibhamu 50 kuphela ngaphandle esikhundleni kwesigubhu nge air onomfutho, okuyinto kancane kathathu kuka e Crosman C31.
Nakuba izici lobuchwepheshe kukhona bokuthi phakathi onobuhle eziningi zezikhali womoya, kodwa zonke amateur nezobuchwepheshe has abakukhethayo ayengasekela kubo kukhethwa isibhamu oyifunayo.
Indlela ukukhetha ibhayisikili kwesokudla
Scott Amabhayisikili. Uhlolojikelele, izici kanye nokubuyekeza
"Torneo" - ukuzilolonga kwe-elliptical: incazelo, Uhlolojikelele, imibono kanye nokubuyekeza
Stroke ukunqoba - Nike eRussia
Stepper: ukubuyekezwa kanye nemiphumela. Zendiza, steppers emakhaya: incazelo, isithombe
Ihhotela Edene Club 3 * (Tunisia, Monastir): izithombe kanye nokubuyekeza
Kuhle Antivirus 2013
Lapho ukuchitha uNcibijane eMoscow?
Ikhekhe Jellied namazambane futhi inkukhu. Quick yamathebhu ikhekhe: iresiphi
Dzhon Lilli: Biography, izincwadi, izithombe
Dream Ukuhunyushwa: ukubhukuda olwandle noma emfuleni lokho kuyiphupho nje?
Kuhle coffee shop e-Amsterdam: Umhlahlandlela for the saqala, imibono kanye nokubuyekeza
"Voronezh-Pridacha": esidlule, ikusasa nezamanje
Linganisela ku hearthstone kanjani ukuze uthole? Amamephu hearthstone
Art. 619 we Code Civil: Litigation
Dala ekwindla Ukwakheka ngezandla zakhe, noma kanjani ukugcina izinkumbulo kwesizini segolide
Indlela aphonse imali "Kyivstar" ukuze "Kyivstar"? ukudluliswa imali "Kyivstar"